फेसबुकबाट भिडियाेहरू सित्तैमा कसरी डाउनलाेड गर्ने ? । भिडियाेडर
फेसबुकबाट भिडियाेहरू कसरी डाउनलाेड गर्ने ?
फेसबुकका भिडियाेहरू फेसबुक वेबसाइटबाटै डाउनलाेड गर्नुहाेस ।
वेबसाइट खाेल्नुहाेस र लगइन गर्नुहाेस ।
ब्राउजर पेजकाे फेसबुक प्रतीक चित्रमा थिच्नुहाेस र अाफ्नाे फेसबुक खातामा लगइन गर्नुहाेस । लगइन एक पटक मात्रै अावश्यक छ । एकपटक लगइन गरेपछी ब्राउजरले तपार्इँकाे लगइन जानकारीहरू स्मरणमा राख्छ र पछी अावश्यक हुँदा उपयाेग गर्छ ।
डाउनलाेड बटनमा थिच्नुहाेस ।
प्रत्येक भिडियाेहरूमा नीलाे रंगकाे बटन जाेडिएकाे हुनेछ । अाफूले डाउनलाेड गर्न खाेजेकाे भिडियाेकाे डाउनलाेड बटनमा थिच्नुहाेस ।
भिडियाेकाे गुणस्तर छान्नुहाेस ।
चित्रपटकाे तल्लाे भागमा डाउनलाेड सूत्रहरू र विस्तृत विवरणसहितकाे एउटा पर्दा देखापर्छ । त्यहाँबाट तपार्इँ अाफूले चाहेकाे गुणस्तर छानी डाउनलाेड गर्न सक्नुहुन्छ ।
भण्डारण स्थान र थ्रेडहरूकाे संख्या निर्धारण गर्नुहाेस ।
गुणस्तर छानिसकेपछी एउटा सानाे बक्स देखापर्छ जसबाट तपार्इँ डाउनलाेड भण्डारण स्थान र तीव्र डाउनलाेड गतिकाे लागी नेटवर्क थ्रेडहरूकाे संख्या परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपार्इँकाे डाउनलाेड अब शुरू हुन्छ
डाउनलाेड बटनमा थिचेपछी तपार्इँकाे डाउनलाेड शुरू हुन्छ । चित्रपटकाे माथिल्लाे भागमा रहेकाे डाउनलाेड प्रतीक चित्रमा थिची तपार्इँ अाफ्ना डाउनलाेडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ।
भिडियाेहरू फेसबुक एपबाट सिधै डाउनलाेड गर्नुहाेस ।
विकल्पहरू प्रतीक चित्रमा थिच्नुहाेस
फेसबुक एप खाेल्नुहाेस र डाउनलाेड गर्न खाेजेकाे भिडियाेकाे विकल्पहरू प्रतीक चित्रमा थिच्नुहाेस ।
“प्रतिलिपि सूत्र” विकल्प छान्नुहाेस
जब विकल्प सूची देखापर्छ तब “प्रतिलिपि सूत्र” विकल्पमा थिच्नुहाेला ।
तपार्इँले डाउनलाेड गर्न छानेकाे भिडियाे सहित एउटा बक्स चित्रपटकाे मुनिबाट देखा पर्छ । त्यसकाे डाउनलाेड बटनमा थिच्नुहाेस ।